Boorsada CVS-ka Cas ee Samurai - Muuqaalka Shumaca
Tirada Boorsada CVS Red Samurai
SKU: 6046958CD684F Category: Casaan Samurai
Boorsadan boorsada leh ee tayada sare leh oo ay kujirto nashqadeynta caadiga ah ee 'Red Samurai design' waxay kufiicantahay dhamaan baahiyahaaga casriga ah waxayna ku siinayaan qalab aad ufiican si aad ugu xafiddo dhamaan waxyaabaha aad gacanta kuheyso.
Shandadani waxay ka kooban tahay CVS-ga Casriga ah ee Samurai Girl Design oo leh CVS-kayga Hannya Demon Dog ee dhinaca ah.Ka hel boorsadaada Samurai Girl adoo gujinaya badhanka ku dar batoonka.
Samurai Girl design boorsada - kaaga hadda hel!
Haddii aad dareento inaad nus ka mid ah alaabtiina wadatid marwalba, boorsadaan waa adiga! Waxay leedahay qayb ballaadhan oo gudaha ah (oo leh jeebka kombuyuutarkaaga gacanta), muuqaal qurux badan Red Samurai Girl Design iyo jeeb dhabarka qarsoon oo lagu ilaalinayo alaabtaada ugu qiimaha badan.
• Laga sameeyay 100% polyester
• Miisanka dharka: 9.91 oz / yd² (336 g / m²)
• Cabirka: 16.1 ″ (41 cm) oo dherer ah, 12.2 ″ (31 cm) oo ballac ah, iyo 5.5 ″ (14 cm) dhexroor
• Awood: 5.3 galaan (20 l)
• Miisaanka ugu badan: 44 lbs (20 kg)
• Maaddada biyaha u adkaysata
• Jeeb weyn oo jeeb gooni ah ku wata laptop 15 ah, jeeb qarsoon oo leh jiinyeer xagga dambe ee bacda
• Xaashiyaha dusha sare leh waxay leeyihiin boodhadhka 2, waxaana jira jiido jiido oo ku lifaaqan muraayad kasta
• Dalool xariif ah, oo ku dhex tuubbanaan jirrooyinka, iyo dhabarka mesh jilicsan
• Xarkaha boorsada ergonomic boorsada ah oo ka sameysan polyester oo leh xakamayn suunka caagga ah
• Waxyaalaha alaabada madhan ee laga sameeyay Shiinaha
Noqo qofka ugu horreeya ee dib u eega "CVS Red Samurai Backpack" Cancel reply